Salvadaoro: Tsy mihena ny fitiavan’ny vahoaka ny filoha Bukele na teo aza ny fiampangana azy ho manao tsy refesimandidy · Global Voices teny Malagasy
Ahoana ho hanazavana io laza io ?
Nandika (fr) i Gaël Jojo
Voadika ny 07 Marsa 2021 13:59 GMT
Ny 6 Febroary 2021, navoakan'ny CID Gallup ny tsapahevitra voalohany nataony tamin'ity taona ity momba ny filoha salvadôriàna Nayib Bukele sy ny nitantanany ny valanaretina COVID-19. Araka io tsapahevitra [es] io, 91 % amin'ireo Salvadôriàna no afapo tamin'ny fomba nitantanan'ny filoha Bukele ilay olana ara-pahasalamàna.
Tsy ny fakankevitra nataon'ny CID Gallup tamin'ny 6 Febroary irery ihany no mampiseho ny fitiavan'ny vahoaka ao Salvadaoro an'i Nayib Bukele. Hatramin'ny Janoary 2020, 13 no isan'ireo fandalinana natao momba ny fanekena ny asan'ny filoha na koa ny fitantanany ny valanaretina COVID-19 ; Ireny rehetra ireny dia samy nanome taham-panekena mihoatra ny 75 isanjato an'i Bukele avokoa.
Kanefa, ny asa vitan'i Bukele dia kianin'ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona [fr] sy ny Fikambanan'ireo Firenena ao Amerika (OEA). Anakianana azy ny ho lasa vao mainka manao tsy refesimandidy, zavatra iray tsapa mifototra amin'ny zavamisy hoe nanohintohina ireo andrimpanjakana demaokratika ao amin'ny firenena izy ary nanao vava tamin'ireo mpanao gazety. Ohatra, ny 9 Febroary 2020, niditra [fr] tao amin'ny parlemanta salvadôriàna i Bukele, narahan'olona nirongo fiadiana, fihetsika izay ambaran'ireo sasany mpaneho hevitra ho toy ny andrana fanonganam-panjakana ara-miaramila. Ho azy filoha kosa, nitady izay hoentina manamarina ilay fitsofohana izy, izay, araka ny filazany, dia natao hanaovana tsindry amin'ireo mpanao lalàna mba handanian-dry zareo ireo vola natokany ho an'ny drafi-piarovana.
In El Salvador – President Bukele called for an extraordinary legislative session to vote for a $109 million loan. Congress refused and now the El Salvador Military has taken over control of the legislative assemblye#ElSalvador pic.twitter.com/kRhRDYO7aC
Taorian'ilay fanonganam-panjakana tamin'ny 31 Janoary, nahafatesana olona roa avy amin'ny mpomba ny mpanohitra, hetsika fanafenan-javatra ireny herisetra ara-politika ireny, hoy Ing. Bukele. Andro vitsy taorian'izay, nandefa taratasy ho an'Ing. Bukele ireo mpikambana roa avy ao amin'ny Kaongresy Amerikàna, Albio Sires sy Norma J. Torres, ka tao anatin'izany no nanehoan-dry zareo ny ahiahiny sy nanentanany azy mba « ho mpampita hafatra fandriampahalemana no sady hisoroka ny fandrehetana fisarantsarahana sy herisetra ».
Ao Salvadaoro, izay iray amin'ireo firenena mahery setra indrindra eto an-tany, iainana isanandro[pdf] ny tsy fandriampahalemana. Nisy fandalinana hafa nampiseho [pdf] fa ireo olona miatrika tsy fandriampahalemana ara-toekarena dia manana fironana hisafidy ireo mpitantana tsy refesimandidy ; io petrakevitra io dia mety hitranga ho an'i Salvadaoro, izay mahantra avokoa ny ampahatelon'ny mponina.
Asian'ireo manampahaizana tsindrimpeo ny zavamisy hoe ampiasain'i Bukele ho amin'ny tombontsoany ny tambajotra sôsialy ary feheziny araka izany ny vahoaka. Fanampin'izay, mahazo tombony amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka izy ho entina mivarotra ny heviny, hanaovana ny fampahafantarana azy sy ireo tetikasany : tamin'ny 2019, nangataka [es] 22 tapitrisa dolara izy hanaovana dokambarotra.
Na tsarain'ny sasany ho tsy refesimandidy aza, efa naka mialoha fepetra matotra i Bukele, izay nandray anjara tamin'ny fanakanana ny fihazakazahan'ny fidiran'ilay viriosy tao amin'ny firenena. Ohatra, talohan'ny nahitàna ny tranga COVID-19 voalohany tao Salvadaoro, nodidian'i [fr] Bukele hakatona daholo ny sisintany, ny seranampiaramanidina iraisampirenena ary naato daholo ny fitaterana iraisana. Namoahany didy ihany koa ny fanibohana [es] olona marobe. Araka ny tsapahevitra iray navoakan'ny gazety iray tao an-toerana tamin'ny May 2020, na nanohintohina ny toekaren'ny firenena aza ireny fepetra tany am-boalohany ireny, 95,7 % tamin'ireo Salvadôriàna no nankasitraka ireo fanapahankevitra noraisin'ny filoha Bukele nataony hanakanana ny fiparitahan'ny COVID-19.
Etsy andanin'izany, hatramin'ny niafaran'ny ady an-trano nandrotika ny firenena tany amin'ny andian-taona 1980 tany, dia ny an'ny fitantanana Bukele no ambany indrindra ny tahan'ny vono olona. Tamin'ny 2020, raha ampitahaina amin'ny taona 2019 dia nidina 44,9 isanjato[es] ny tahan'ny vono olona tao amin'ny firenena. Hita taratra any anatin'ireo tsapahevitra [es] ihany koa izany.
Farany, mandray anjara amin'ny fitomboan'ny lazan'ny filoha Bukele ihany koa ny faharefoan'ireo antoko politika mpanohitra. Ho an'ny ankamaroan'ny Salvadôriàna dia tratry ny kolikoly ireo antoko roa hafa lehibe indrindra nitantana ny firenena tato anatin'ny 30 taona farany, ny FMLN sy ny ARENA.
Ohatra, telo amin'ireo filoha nivoaka avy tamin'ireo antoko politika roa ireo no voampanga ho nanao kolikoly. Paco Flores [es] maty teo am-piandrasana fotoam-pitsarana azy fony izy nogadraina tsy nahazo mandao ny toerana noneny, raha i Tony Saca [es] indray any am-ponja ary manefa sazy 10 taona noho ny fanodinkodinana volam-bahoaka. Mauricio Funes [es] mialokaloka ara-politika any Nikaragoà, afaka amin'ny fampodiana olo-meloka mankany Salvadaoro ; marobe ny fiampangàna miandry azy amin'ny resaka famotsiambola tao Salvadaoro sy Goatemalà.
Tao amin'ny fahitalavi-panjakàna [es], Marvin Aguilar, mpandalina malaza ny raharaha politika, dia milaza fa noho ny fianjeran'ireo teo alohany no nahazon'i Bukele ny lazany:
Araka ny tsapahevitra iray navoaka tamin'ny 12 Febroary, avy amin'ny Ivontoeran'ny anjerimanontolo mpamoaka ny hevitry ny daholobe (IUDOP [es ; pdf]) avy ao amin'ny Oniversite Jose Simeon Cañas, ny Hevitra Vaovao [fr], ilay antoko politika najoron'i Bukele, no handresy amin'ireo fifidianana solombavambahoaka hoavy eo. Hahafahany mifehy bebe kokoa ny parlemanta izany. Vaovao tsara izany ho an'ireo manohana an'i Bukele, fa vaovao ratsy ho an'ireo mihevitra azy ho mpanao tsy refesimandidy.